1 Karazana # 1: Penjana Palet Warna
1.1 Penjana Palet
1.3 Warna Adobe
1.4 Alternatif lain
2 Sokajy # 3: Penjana Tangkapan Skrin Laman Web
2.2 Halaman Pencari
3 Sokajy # 5: Penjana Latar Belakang Web
3.6 Penjana Butang Laman GR
4 Sokajy # 8: Bentuk Generasi
4.1 Borang Logix
4.2 Borang PHP
Raha mitady fomba haingana kokoa ny asanao ianao ary mandefa fotoana sy hery bebe kokoa hevitra momba ny votoaty vaovao ary -barotra paikady, Mino aho fa ny lisitra dia tsy maintsy-tsoratadidy. Statistik Araka ny fijeriko farany WordPress.com, mihoatra ny XmUMX tapitrisa ny blaogy navoaka isam-bolana.
Karazana # 1: Penjana Palet Warna
Fungsi / Butiran:
Adobe Color dia fampiharana miorina amin’ny rahona hamolavolana lohahevitra amin’ny alalan’ny iPhone na ny navigator. Ny fitaovana dia manampy ny fanangonana loko avy amin’ny sary sokitra, zaridaina, na aiza na aiza misy anao ary mamorona ny volonao manokana. Azonao atao koa ny manaisotra ny loko amin’ny sary ary mampifanaraka ireo lohahevitra ireo ao amin’ny Adobe Illustrator CC.
Ny fitaovana loko hafa tsy dia tsara loatra dia Color Hunter, Color Lovers, CSS Drive Colette Palette Generator, ary koa Colllor. Mariho fa na dia miasa bebe kokoa aza ireo fitaovana ireo (mamorona palette miloko miorina amin’ny sary fampidiran-tsary) fa ny automatik yang dihasilkan ny code couleur dia mety hafa noho ny fahasamihafana amin’ny algoritma fampirimana loko. Manoro hevitra anao aho mba hanandrana ny tsirairay, fara fahakeliny.
Sokajy # 3: Penjana Tangkapan Skrin Laman Web
Mba hamoronana haingana tangkapan layar aminnyny tranonkala ho an’ny fanaraha-maso na tanjona votoaty.
Mba hamoronana gambar kecil ny tranonkala iray mafana.
Adakah responsif ve aho dia tsy mpamokatra fakana sary? Na izany aza, fitaovana iray tsy tokony ho lanonana izany – Manara-maso ny fandraisana andraikitra amin’ny tranokala rehetra miaraka amin’ny kitay tokana. Fotoam-panam-potoana lehibe ho an’ireo izay mamolavola lohahevitra mamaly izany.
Sokajy # 5: Penjana Latar Belakang Web
Ny sasany amin’ireo fitaovana ireo dia mitaky anao haka sary ny sary afara; Ny sasany dia hanome anao ny CSR rehetra.
Tartan Maker – Gaya Tart ao amin’ny tartan
Colorzilla – Mamolavola dingana miandalana dan amin’ny kod CSS.
Penjana Butang Laman GR
Laman GR – mamorona bokotra amin’ny endri-tsoratra sy ny loko.
Alternatif: Saya suka IMG, DIY LOL, Manaova Mim ary IMG Flip.
Sokajy # 8: Bentuk Generasi
Borang PHP – Mamorona endrika HTML dan amin’ny 3 langkah mudah, tsy mila sonia.
Berikut adalah senarai 70 penjana web terpilih, mudah digunakan dan percuma yang akan menjimatkan